Xarunta Xuquuqal Insaanka Sheegtay Inay Aad Uga Walaacsan Tahay Xadhiga Abwaan Cabdiraxmaan Abees Iyo Dacwadda Ciqaabta Ah Suxufiyiinta Wargeyska Foore – somalilandtoday.com
Xarunta Xuquuqal Insaanka Sheegtay Inay Aad Uga Walaacsan Tahay Xadhiga Abwaan Cabdiraxmaan Abees Iyo Dacwadda Ciqaabta Ah Suxufiyiinta Wargeyska Foore
(SLT-Hargeysa)-War-saxaafadeed ay xurunta xuquuqal iinsaanka soo saartay ayaa lagu cambaareeyay xadhiga Abwaan Cabdiraxmaan Abees, oo shalay ciidamada boolisku xidheen. Sidoo kale waxa war-saxafeedkan ay xarunta xuquuqal iinsaanku walaac kaga muujisay dacwad ciqaab ah oo lagu soo oogay suxufiyiinta wargeyska Foore. War-saxaafadeedkan oo nuqul ka mid ahi soo gaadhay Somalilandtoday.com ayaa u dhignaa sidan;
“Maalintii sabtida ahayd ee 12 January 2019 waxa dawladda Somaliland ay xidhay abwaan Cabdiraxmaan Abees oo ah muwaadin dhalashada Somaliland iyo Ingiriiska haysta.
Xadhiga abwaanku waxa uu la xidhiidhaa gabayo uu ka tiriyay 11 January maagalada Hargeysa, sida ay Xarunta Xuququqal Insaanka u xaqiijiyeen saraakiil dawladda ah iyo ehelka abwaanku.
Xadhiga abwaanku waxay xad gudub ku tahay dastuurka Somaliland, waana cabudhin.